तरुनी हुदा सबै मिल्यो बच्चा जन्मेपछि जात मिलेन भन्दै श्रीमान फ’रार ! श्रीमती रु’दै आईन मिडियामा [भिडियो सहित] - Mitho Khabar
February 6, 2020 mithokhabarLeaveaComment on तरुनी हुदा सबै मिल्यो बच्चा जन्मेपछि जात मिलेन भन्दै श्रीमान फ’रार ! श्रीमती रु’दै आईन मिडियामा [भिडियो सहित]
उनको कथा सुनेर कसको पो मन रुदै
न होला र ? श्रीमानसँग केहि महिनाको प्रेम पछि बिहे गरेका श्रीमानले चटक्कै छोडेर गएपछि अहिले उनको बि’चल्ली भएको छ । जातलाई लिएर श्रीमानले शारीरिक र मानशिक पि’डा दिएर जिन्दगि ब’र्बाद भएको उनले बताएकी छिन् ।